Dowlad FS Oo Digniin Culus u Dirtey Maamulkii hore Ee Jubaland – hareerley News
Xukuumada FS ayaa digniin adag u dirtay maamulkii hore ee Jubbaland, waxaana ay sheegtay in tilaabo laga qaadi doono hadii ay isku dayaan in ay hor istaagto qorshaha cusub ee dowladdu ku wajaheyso degaanada maamulka Jubbaland.
War kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa lagu sheegay in qorshaha cusub ee soo xulista baarlamaanka Jubbaland iyo doorashada Madaxweynaha Jubbaland Cidii ka hor timaada ay diidan tahay Nabadda.
” Cidkaste oo si kulac ah u hor istaagta qorshaha nabadeynta iyo maamul dhisidda waxaa loo aqoonsan doona Caqabad nabadda hor taagan waxaana lala tiigsan doona Sharciga” ayaa lagu yiri Warka kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha.
Khilaafka ka dhex taagan dowlada dhexe iyo maamul goboleedka Jubbaland ayaa sababay in dowladda Soomaaliya ay xayiraad saarto Magaalada Kismaayo, taasoo ay kala kulantay falcelin aan wanaagseyn oo bulshada kaga timid.
Dagaallo ka dhacay Afmadow iyo faah faahino ka soo baxaya
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaallo u dhexeeyey ciidamada huwanta iyo Al-Shabaab oo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose. Dagaalladan oo dhacay xalay saqdii dhexe ayaa yimid, kadib markii dagaalyahano ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weeraro saf-ballaaran ah ku qaadeen saldhigo ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuw Kenya ay ku leeyihiin gudaha degmadaasi. Ilo […]
Wafdi ka socda IGAD Oo Booqdey Xarunta Guddiga Doorashooyinka Jubbaland
Wafdigii IGAD ee xaqiiqa raadinta u joogay magaalada Kismaayo ayaa kormeer ku tagay hoolka cusub ee loo diyaariyay doorashada. Xubnahaan oo Kismaayo ku sugan ayaa sidoo kale la kulmay qaar ka mid ah Odayaasha Kismaayo. Waxaa kormeerkooda ku wehelinayay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashayooyinka Jubbaland. Guddiggaan ayaa horay ula kulmay Madaxweynaha Jubbaland iyo […]